Haweeney markii ugu horeesay Madax ka noqotay Maxkamada ugu sareysa dalka Itoobiya. – Xeernews24
Haweeney markii ugu horeesay Madax ka noqotay Maxkamada ugu sareysa dalka Itoobiya.
Ra’isul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa markii ugu horeesay taariikhdda waxaa uu haweeney u magacaabay in ay madax ka noqoto Maxkamada ugu sareysa dowlada Federaalka ee Itoobiya.
Meaza Ashenafi oo ahayd qareen dhanka xuquuqda aadanaha ayaa noqotay haweeneydii ugu horeesay ee Madax ka noqota Maxkamada ugu sareysa dalka Itoobiya, waxaa ayna haweeneydan sannado fara badan ku dhex soo jirtay dhinaca garsoorka dalka Itoobiya.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/11/meza.png 150 218 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-11-01 14:44:072018-11-01 14:44:07Haweeney markii ugu horeesay Madax ka noqotay Maxkamada ugu sareysa dalka Itoobiya.
Ethiopian Airlines oo Muqdisho ka bilaabaysa duullimaadyo. Dawladda Jamhuuriyadda Djabuuti Oo ku faantay In Ay cagta saartay Dhabadii...